Unvanquished: အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသော FPS ၏ Beta အသစ်နံပါတ် 0.52 Linux မှ
ဒီနေ့လယ်ကွင်းကိုဖြေရှင်းတယ် Linux ပေါ်မှာ Gamer အထူးကောင်းမွန်သောဂိမ်းများစာရင်းတွင်ရရှိနိုင်သည့်အချက်အလက်များကိုဆက်လက်တိုးချဲ့ရန် FPS ကိုရိုက်ပါ, ငါတို့ပေါ်မှာကစားနိုင်ပါတယ် အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း operating system များသို့မဟုတ်အခြားသူများ။
ဒီတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာမကြာသေးခင်ကထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အခွင့်ကောင်းကိုရယူနိုင်ခဲ့တယ် « Unvanquished »၏ Beta ဗားရှင်း 0.52 အသစ် အကြောင်းအနည်းငယ်သိရန် ဇာတ်ကောင် ကနှင့်ပိုပြီး။
ဗီဒီယိုဂိမ်းကိုမနှစ်သက်သောသူများအတွက်၊ အထူးသဖြင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားသူများအတွက်ဖြစ်သည် FPS အမျိုးအစား (ပထမလူသေနတ်သမား) ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးလေးကနေ ပထမလူပစ်ခတ်မှု (စပိန်ဘာသာဖြင့်), ထိုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်သောသူတို့အားဗီဒီယိုဂိမ်းဖြစ်ကြသည် သေနတ်အသုံးပြုမှု ပထမ ဦး ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ဘာသာရပ်၏ရှုထောင့်ကနေ။ ဒီဗီဒီယိုဂိမ်းတွေဟာတခြားသူတွေနဲ့ဆင်တူတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာများကိုမကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိတယ် ဂိမ်းကစားခြင်းထို့ကြောင့်သူတို့သည်အကြိမ်များစွာစဉ်းစားကြသည် action ကိုဂိမ်း.
ဗီဒီယိုဂိမ်းကိုနှစ်သက်သူ၊ အထူးသဖြင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားသူများအတွက်ဖြစ်သည် FPS ကိုရိုက်ပါငါတို့သည်သင်တို့အချို့ကိုထားခဲ့ပါ သက်ဆိုင်သောယခင်ပို့စ်များပြီးရင်ပြီးရင်သူတို့ကလိုအပ်ရင်စူးစမ်းလို့ရတယ်။
1 Unvanquished: အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း FPS
1.1 Unvanquished ကဘာလဲ?
Unvanquished: အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်း FPS
၏အကြောင်းအပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း « Unvanquished »၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည် -
"Unvanquished သည်လွတ်လပ်ပြီးပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်ပထမ ဦး ဆုံးသူမဟာနည်းဗျူဟာဂိမ်းဖြစ်ပြီးအဆင့်မြင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေထိုင်နိုင်သည့်ဂြိုလ်သားများနှင့်အတူနည်းပညာအဆင့်မြင့်လူသားစစ်သည်များကိုထိုးဖောက်သည်။ ကစားသမားများသည်မည်သည့်အသင်းကိုမဆိုရွေးချယ်နိုင်သည့်နေရာ၊ နှစ်ဖက်စလုံးအတွက်လုံးဝကွဲပြားသောအတွေ့အကြုံဖြစ်သည့်အတွက်လူသားများသည်တာဝေးပစ်စွမ်းအားကိုအဓိကထားသောကြောင့်၊"
"ဂိမ်းတစ်ခုစီ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာရန်သူအခြေစိုက်စခန်းအားဖျက်စီးခြင်း၊ အဖွဲ့နှစ်ခုလုံးအတွက်အဆင့်မြှင့်တင်မှုများကိုတစ် ဦး ချင်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အဖွဲ့၏မြေပုံကိုထိန်းချုပ်ခြင်း၊ လူသားများအတွက်ပိုမိုအင်အားကြီးမားသောလက်နက်များနှင့်ကိရိယာများကိုရရှိခြင်းနှင့် alien ည့်သည်များအတွက်ပိုမိုကြီးမားသည့်ပုံစံများဖြင့်ရရှိသည်။"
နောက်ဆုံးအနေနှင့်၎င်းကို developer များအဆိုအရမှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်။
"Unvanquished သည် Daemon အင်ဂျင်မှစွမ်းအားကြီးသော Tremulous ၏လမ်းဆုံလမ်းခွဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂိမ်းကိုစွမ်းအားပေးသော Daemon အင်ဂျင်သည်နောက်ဆုံးတွင်ငလျင် (၃) နှင့် ET: XreaL ၏အင်္ဂါရပ်များသာမကကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကုဒ်အားထုတ်မှုများကိုအခြေခံသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိအင်ဂျင်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောရေရှည်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက် C ++ ဖြင့်ပြန်လည်ရေးသားနေပါသည်။"
ယင်း၏အကြား အဓိကအင်္ဂါရပ်များ အောက်ပါထင်ရှားစွာပြ:
၎င်းသည်အခမဲ့ပြီးပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်အပြင် Cross-platform (Windows, Mac OS နှင့် Linux) လည်းဖြစ်သည်။
၎င်းတွင်ခေတ်မီ OpenGL ဗားရှင်း ၃ သဟဇာတဖြစ်သောပြန်ဆိုချက်ရှိသည်။
၎င်းတွင်အထူးအကျိုးသက်ရောက်မှုများပါ ၀ င်သည်။
၎င်းတွင် HTML4 / CSS2 စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသောခေတ်သစ် libRocket အသုံးပြုသူမျက်နှာပြင်ရှိသည်။
ဂိမ်းယုတ္တိဗေဒအတွက်ဇာတိ Client VM အထောက်အပံ့ပေးထားသည်။
IQM နှင့် MD5 မော်ဒယ်များကိုအရိုးစုကာတွန်းနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာကာတွန်းရောနှောမှုဖြင့်သုံးပါ။
2D minimaps နှင့် real-time beacon စနစ်ကိုအသုံးချပါ။
သာမာန်၊ specular၊ အလင်းရောင်နှင့်အလင်းရောင်ရှိသောမြေပုံများအတွက်အထောက်အပံ့ပေးသည်။
၎င်းသည်အမူအကျင့်သစ်များကိုသုံးသော Navmesh ကို အခြေခံ၍ စက်များအသုံးပြုသည်။
တစ် ဦး မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း သူ၏တရားဝင်ဘလော့ဂ်၏မကြာသေးမီကထုတ်ဝေ, အသစ်က beta ကိုဗားရှင်း 0.52။ ဒါကိုဒီကနေကူးယူနိုင်ပါတယ် download အပိုင်း နှင့်သင်၏ဖော်ပြထားသောအဆင့်များကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်ထည့်သွင်းအသုံးပြုခဲ့သည် GitHub တရားဝင်ဆိုဒ်.
download, အမှု၌, အထုပ် Universal ဇစ်၊ သင်က၎င်းကို unzip လုပ်ရုံဖြင့် terminal (console) တွင်အောက်ပါ command command များကိုလုပ်ဆောင်ပါ။
ဤပထမ command သည် pkg folder ကိုညွှန်ပြရန်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။
သင်ကစားလိုသောအခါတိုင်းအောက်ပါ command ကိုသာအသုံးပြုပါ။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်မည်ဟုမျှော်လင့်ပြီးဖွံ့ဖြိုးမှုအပြည့်ရှိသော FPS ဂိမ်းကိုပျော်မွေ့နိုင်သည်။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" အပေါ် «Unvanquished»မကြာသေးမီကနောက်ဆုံးပေါ် beta ဗားရှင်းနံပါတ် 0.52 ကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီး၊ ဆော့ကစားနိုင်ခြင်း၊ အခမဲ့ download၊ ကူးယူခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ အခမဲ့ဝေငှခြင်း၊ အခမဲ့လေ့လာခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အခမဲ့ထည့်ဝင်ခြင်းစသည်တို့ပြုလုပ်သောပထမဆုံးလူပုဂ္ဂိုလ်နည်းဗျူဟာသေနတ်သမားဖြစ်သည်။ တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Unvanquished - အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသော FPS ၏ Beta အသစ်နံပါတ် 0.52
နှုတ်ခွန်းဆက်စကား, သုညဘာသာစကား။ သင်၏မှတ်ချက်နှင့်အသိပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါက "အခုဆိုအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတယ်" အင်္ဂါရပ်များအပိုင်း၌။
Para preguntar si está en español, no creo que haga falta ese tipo de comentario, además, si no lo dicen específicamente, tengo la costumbre de pensar que no lo está y si luego lo está, genial y si no, pues no me he equivocado… ¿Ves qué sencillo?
Saludos, Noobsaibot73. Gracias por tu comentario. Y con respectoaeso, lo mismo pienso yo. Es decir, si no mencionan idiomas, asumo que solo viene en inglés.
ဆောင်းရာသီ CMS: အသစ်ဖွင့်ပြီးအခမဲ့သော Content Management System